About Us | Sann Thit Tun Industrial
About Sann Thit Tun
Sann Thit Tun Package Printing Factory has been proudly in business since 2010. Our product lines are PVC/PET/ BOPP plastic label printing and PE plastic shrink for packing. We produce plastic labels for purified water bottles, soft drink, wine, fish sauce and chili sauce client customers:Alpine/ Loi Hein/ Asahi Loi Hein Co., Ltd. (Blue Mountain), Lucky, Green Circle (Ve Ve), Lotte MGS Beverage Myanmar/ Pepsi, De De, Quality Foods House, Jazz.
And secondly, Asia Pacific Beverages Myanmar (Sunkist), Europe & Asia, Sam Par Oo, Royal Aster (Bingo), Delicious Food Limited (One Tea), Shwe Ayar Nadi Ltd. (Godzilla), Myanmar Consumer Beverages Ltd. (Designer Water), and Coca-Cola. Since our opening in 2010, our company has substantially gained the trust and confidence of the leading manufacturing businesses in Myanmar.
We have earned our satisfied customers for high product qualities, deliver on time, and discuss with customers their particular needs. We use various quality control methods before we deliver our products.
ကျွန်တော်တို့ Sann Thit Tun Package Printing Factory စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိဆောင်ရွက်ဖြန့် ချီလျက်ရှိသော ကုမ္ပဏီ အများစုမှရေသန့် နှင့်အချိုရည်တံ ဆိပ်များကိုအဓိကထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနှစ်အစ ပိုင်းတွင် MGS/Apline/Ve Veအချိုရည် /De De စိန်ခဲ ရွှေခဲ/Lucky/Jazz (wine) တံဆိပ်များကို ကျွန်တော်တို့ Sann Thit Tun Package Printing Factory မှ ယနေ့ တိုင်လက်တွဲဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင် အသစ်ထပ်မံဝင်ရောက် လာသော ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Asia Pacific Beverages Myanmar (Sunkist), Europe & Asia, Sam Par Oo, Royal Aster (Bingo), Delicious Food Limited (One Tea), Shwe Ayar Nadi Ltd. (Godzilla), Myanmar Consumer Beverages Ltd. (Designer Water), and Coca-Cola အချိုရည် များ၏ PVC / PET/ BOPP/ PE Shrink Packing နှင့် Colors Printing PE Shrink Packing တံဆိပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ၏အဓိကဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခြင်းမှာအရည်အသွေးကိုအစဉ်တန်ဖိုး ထားခြင်း၊ထုတ်ကုန်စနစ်များ အပေါ်အထူးဂရု စိုက်ခြင်း၊ Customer များ၏လိုအပ်ချက်ကို အထူးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ Order မှာယူခြင်း များတွင်၊ လိုအပ်သောနေရာသို့ အချိန်မှီပို့ဆောင်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အား Customer အများစု၏ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေခြင်းမှာ(PVC/PET/BOPP) တံဆိပ်များကိုသာ သီးသန့်ဆောင်ရွက်ပေးနေ သော Printing Factory တခုအဖြစ်ရပ်တည် နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထုပ်လုပ်မှု အနေဖြင့် Packing(PE)သည်လည်ပတ်မှုအား ကောင်းသောကြောင့်ကုမ္ပဏီအများစု၏ Order မှာယူမှုများအား အချိန်နှင့် တပြေးညီဆောင် ရွက်ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခြင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ Sann Thit Tun Package Printing Factory ၏ အဓိကအားသာချက်ဖြစ်ပါသည်။
Our Mission ( ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် )
We seek to accomplish our vision with honesty, integrity, passion and customer satisfaction.
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်စေရန် ရိုးသား၊ ဖြောင့်မတ်၊ စာနာစိတ်ဖြင့် ဝယ်ယူသူများ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အ၀ ရရှိစေရန်ကြိုးစားအားထုတ်သွားမည်။
Our vision ( ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက် )
To be the top plastic package printing company in Myanmar.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပလပ်စတစ်တံဆိပ်ရိုက် ထုပ်ပိုးမှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်ဆုံး နေရာသို့ ရောက်၇မည်။
To provide great service and forming lasting relationships with our clients.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ကြာရှည်လက်တွဲ၍ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရမည်။
To beasafe working area and healthy workplace according to ( ISO 9001:2015).
To beasafe working area and healthy workplace according to
( ISO 9001:2015).
လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော လုပ်ငန်းခွင် ဖြစ်စေရန် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်၇မည်။
Our quality policy ( ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒ )
To obtain the fully satisfaction and trust from the customers, we are administering systematically.
ဖောက်သည်များ၏ ယုံကြည်မှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအား ရာနှုန်းပြည့်ရရှိစေရေးကို စနစ်တကျ စီမံထားရှိရမည်။
To get the high quality of printing and sharp colors.
ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်များ အရည်အသွေးပြည့်ဝကောင်းမွန်စေရန်နှင့် အရောင်အသွေးလှပ စိုပြေစေ ရမည်။
To give the training to employees not only in local but also to abroad to upgrade their skills for further project.
ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး တိုးတက်စေရန်အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ သင်တန်းများ သို့စေလွှတ်၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရမည်။
To be beneficial to our customers, employees and business partners whatever we do.
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုသည် ဖောက်သည်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် အကျိုးတူလုပ်ငန်းရှင်များ အတွက်ဖြစ်စေရမည်။
© 2022 Sann Thit Tun Industrial. All Rights Reserved.